China isiseko senkunkuma yejack yelocklock, ikomityi okanye isakhelo sikaH njl.umzi mveliso kunye nabathengisi | Zhongming
Ukusetyenziswa kwesiseko sejack: Isetyenziswa ngemibhobho yentsimbi kunye nezikereyi kwinkqubo yokwakha ukulungisa ukuphakama kwezikafu kunye nolwakhiwo lombhobho, ukulinganisa ubunzima bokuxhasa, kunye nokuthwala umthwalo. Isetyenziswa kakhulu kwinkqubo yokwakha ikhonkrithi yokugalela ukwakhiwa. Ngophuhliso olukhawulezileyo lwearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba kunye nokuhamba okunemilinganiselo emithathu kule minyaka idlulileyo, inani lenkxaso yophahla nalo lenze inkqubela phambili ngokukhawuleza.
Ucalulo lweejacks zokwakha:
1. Ngokwenxalenye esetyenzisiweyo, inokwahlulwa ibe yinkxaso ephezulu kunye nenkxaso esezantsi
① Inkxaso ephezulu isetyenziswa kwisiphelo esingaphezulu kumbhobho wentsimbi, i-chassis ikwisiphelo esingasentla, kwaye i-chassis ine-hemming;
Inkxaso esezantsi isetyenziswa kumzantsi wombhobho wentsimbi kulwakhiwo lweprojekthi yokwakha, i-chassis ikwindawo esezantsi, kwaye i-chassis ayinakusongwa;
2. Ngokwezixhobo zesikrufu, inokwahlulahlulwa ibe ziindidi ezimbini: i-jack engenanto kunye nejack eqinileyo. Isikrufu esikhokelayo sejack senziwe ngombhobho wentsimbi onqindilili, okhaphukhaphu; i-jack eqinileyo yenziwe ngentsimbi ejikelezayo, enzima.
3. Ngokokuba inamavili okanye akunjalo, inokwahlulwa phakathi: ngenkxaso ephezulu yesiqhelo kunye nenkxaso ephezulu yevili yomlenze. Iijack ezinamavili zihlala zenziwe ngerabha kwaye zisetyenziswa kwinxalenye esezantsi yetafile ehambayo ukuququzelela ukukhuthazwa kwenkqubo yokwakha; izixhobo eziqhelekileyo zisetyenziswa kulwakhiwo lwezakhiwo zobunjineli ukuxhasa uzinzo.
4. Ngokwenkqubo yokuveliswa kwesikrufu, ijack eqinileyo inokwahlulahlulwa ibe sisikere eshushu kunye neqhekeza elibandayo. Isikrufu eshushu sishushu sinenkangeleko entle kunye neendleko eziphezulu kancinci; isikrufu esiqengqelekayo sinenkangeleko engaphantsi kwaye inexabiso eliphantsi kancinci.
Ukucwangciswa kwesikrufu sokwakha, inkqubo yokuvelisa yabenzi kwiindawo ezahlukeneyo ziyafana, ubumbeko bohlukile, kwaye ubumbeko bunokwahluka kwimiba emihlanu:
1) Chassis: Ubukhulu kunye nobukhulu be-chassis bahlukile kwimimandla eyahlukeneyo nakwabavelisi.
2) Ukomeleza iimbambo: Nokuba zikhona izinto zokuqinisa iimbambo kwinxalenye yokuqhagamshela kwintonga ye-screw kunye ne-chassis, ngokubanzi ngokweemfuno zeprojekthi, ezona zinto zixhasa phezulu zesikere zixhotyiswe ngokuthe ngqo ngeembambo zokuqinisa, kunye nezantsi ezifutshane zixhasa kunqabile ukuba zixhotyiswe.
I-3) Ubude be-screw ngokubanzi buvela kwi-40 ukuya kwi-70, kwaye ubukhulu be-screw ngokubanzi yi -28, -30, -32, -34, -38mm.
4) Zimbini iinkqubo zokuvelisa uhlengahlengiso lwamandongomane axhotyiswe ngenkxaso: i-iron castings kunye ne-stamping kutengeneza parts. Amantongomane uhlobo ngalunye lokuhlengahlengisa nut linobungakanani bokukhanya okanye obunzima. Zimbini iintlobo zeemilo zenut: isitya sembiza kunye nescrew sephiko
Heavy Duty Ringlock banikwe, Ringlock banikwe Izahlulo, Banikwe Screw Adjustable Screw, Isibiyeli seBhendi yokuQinisa, Metal Cuplock banikwe, Izixhobo zeKwikstage Scaffolding,